FOARA BOENY MIONJO ANDIANY FAHA-III: | Région Boeny
Boeny: hiompana amin’ny fizahantany ny Foara ara-toekarena Boeny Mionjo III
Satria anisany kitro ifaharan’ny fampandrosoana ara-toekarena eto amin’ny faritra Boeny ny fizahantany dia hiompana amin’ny fanomezana vahana an’io sehatra io ny hetsika ara-toekarena Foara Boeny Mionjo andiany faha-III.
Io no nambaran’ny Lehiben’ny Faritra Boeny Atoa Saïd Ahamad Jaffar, raha nanokana ity herinandro ity ho fiantombohan’ny fanomanana ofisialy ny Foara Boeny Mionjo andiany faha-3 izy, nanolona ny mpanao gazety teto Mahajanga omaly.
Fampatsiahivana ny hoe Mionjo, izay teny sakalava: mijoro mirijarija. I Boeny mijoro mandrakariva manoloana ny zava-nandalo sy misy eto amin’ny firenena: Boeny mionjo! Ka ny taona 2014, no nanomboka ny foara andiany voalohany, izay niompana tamin’ny fanomezana vahana mivantana ireo vokatry ny tany sy ny asa-tànana avy eto amin’ny faritra fotsiny aloha.
Ny andiany faharoa kosa ny taona 2015, dia nivelatra tamin’ny fifandraisana sy fifanakalozana traikefa ara-toekarena mba hiteraka asa sy hevitra fampananan’asa ho an’ny tanora eto Boeny. Ary nanomboka nisokatra tamin’ny fiantsoana ireo faritra hafa izany ka nandray anjara tamin’io foara andiany faharoa io Sofia, Analamanga, Bongolava, Itasy, Atsinanana, Analanjirofo. Nasaina tamin’izany ihany koa ireo nosy rahavavavy ka nandray anjara namaly ny antso ny Nosy Comores.
« Ny fizahantany ho an’ny fampandrosoana maharitra »
Io kosa no loha-hevitry ny Foara Boeny Mionjo andiany fahatelo hatao ny 31 aogositra hatramin’ny 03 septambra 2016 eny amin’ny Bord de la mer, manoloana ny Tranoben’ny Varotra sy ny Indostrian’i Mahajanga. Marihina fa mpiara-miombon’antoka amin’ny Faritra Boeny amin’ny fanomanana ny hetsika itsy farany.
Fahombiazana no azo nandritra ireo andiany roa voalohany, raha isan’ny mpandray anjara sy ny mpitsidika nandrandraina no jerena. Hoan’ny taona lasa dia 5 000 no noeritreretina fa maherin’izay no tonga. Raha 100 kosa no mpandray anjara nofaritana dia 120 izy ireo no nanangana tranoheva ny taona 2015.
Manodidina ny 10 000 hoy ny Lehiben’ny Faritra ireo mpitsidika andrasana amin’ity andiany fahatelo ity, ary eo amin’ny 200 ireo mpandray anjara hasaina, ka ankoatra ireo avy amin’ireo Distrika enina mandrafitra ny Faritra, dia eo koa ireo faritra 21 sy ireo nosy rahavavy toa an’i La Réunion, Maurice, Mayotte ary Comores.
Ankoatra ny vokatry ny tany sy ny fiompiana ary ny tao-zavatra, dia samy hanasongadina ny lafiny fizahantany any aminy avokoa ireo mpandray anjara rehetra. Anisany hampivoitra io sehatra io amin’ny 01 septambra ny fandalovan’ny fahatakoman’ny masoandro izay tazana hatrany amin’ny 80% mandritra ny minitra maro ao Boeny Aranta, distrikan’i Mitsinjo, izany hoe miampita eny Katsepy. Ary efa miomana fatratra ny amin’ny fikarakarana ny hisitrahan’ny rehetra izany any an-toerana ny Ofisim-paritry ny fizahan-tany eto Boeny.